ဟောင်ကောင် ဘဲကင် | Wutyee Food House
« ထောပတ် ပြောင်းဖူးကင်
အိမ်လုပ် ပဲပြုတ် »
June 14, 2011 by chowutyee
ဟောင်ကောင်စတိုင် အိမ်လုပ် ဘဲကင်လေးပါ။ ပျားရည်၊ တရုတ်ဟင်းခတ်၊ ဆန်ဝိုင်တို့နဲ့ နှပ်ထားတာမို့ ဘဲကင်ရဲ့ ချိုစိမ့်တဲ့ အရသာရယ်၊ ဘဲကင်ရဲ့ မွှေးရနံ့ကိုပါ အပြည့်အ၀ ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ လုပ်နည်းကလည်း လွယ်တာမို့ အိမ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ စီးပွားရေးအတွက် ရောင်းရန်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် လုပ်စားနိုင်ပါတယ်။ လုပ်နည်းလေးကို တူတူကြည့်လိုက်ရအောင်…
ဘဲ [duck] ♦ ၁ကောင်( ၅-၆ပေါင် )
ဆား [salt] ♦ လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၂ဇွန်းခွဲ
ဂျင်း [ginger] ♦ လက်တဆစ် (မညက်မညက် ထောင်းပါ)
ကြက်သွန်မြိတ် ♦ ၁ခု
နတ်နတ်ပွင့် [star anise] ♦ ၂ခု
ဘဲကင်နည်း [Grill Recipes]
၄။ ပြီနောက် ဂျင်း၊ ကြက်သွန်ဖြူ၊ ကြက်သွန်မြိတ်တို့ကို ကြက်သားအတွင်းပိုင်းထဲ ထည့်ပေးပါ။
၅။ အရသာ အတွက် ဘဲသားကို ဆားများဖြင့် သမအောင် ဘဲအတွင်း၊ အပြင် နုယ်ပေးထားပါ။
၆။ ဘဲကင်တွင် လိုအပ်သော ဆော့ရည်အတွက် (ပျားရည်၊ ရှာလကာရည်၊ ဆန်ဝိုင်၊ တရုတ်ဟင်းခတ်၊ ဆီ၊ နတ်နတ်ပွင့်) တို့ကို ခွက်တစ်ခုထဲသို့ ထည့်ပြီ ရောမွှေလိုက်ပါ။
၇။ ထိုဆော့ရည် စားပွဲတင်ဇွန်း၁ဇွန်းကို ဘဲသားအတွင်း ပိုင်းထဲသို့ ထည့်ပြီ နှီ(သို့) ကြိုးဖြင့် ပုံတွင် ပါသည့်အတိုင်း ဘဲဘင်ပိုင်းကိုလုံအောင် ချည်ပြီ ဘဲပေါင်နှစ်ခုဖြင့် ရောချည်ထားလိုက်ပါ။
၈။ ပြီလျှင် ကျန်ဆော့ရည်များကို ဘဲတစ်ကောင်လုံး ပေါ်သို့ လောင်းချပြီ ရေခဲသေတ္တာထဲတွင် အနည်းဆုံး ၄နာရီခန့် အဖုံးအုပ်ပြီ နှပ်ထားပေးပါ။
၉။ ဘဲကင်ကို စကင်လို့ရပါပြီ။ ကင်မည်ဆိုလျှင် ဘဲတစ်ကောင်လုံး အောက်မှာ သတ္တုပြား(Aluminum Foil) ခံပြီမှ ကင်ပေးပါ။
၁၀။ Ovenနဲ့ ကင်မည်ဆိုလျှင် ၂၀၀ဒီဂရီ ထားပြီ နှပ်ထားသော ဘဲကို တဖက် နာရီဝက်နှုန်းဖြင့် ၁နာရီခွဲမှ ၂နာရီခန့် ဘဲအရေခွံကြွပ်သည် အထိ ကင်ပေးပါ။
၁၁။ ကင်နေစဉ် အတွင်း နာရီဝက်တခြား ဘဲအပေါ်မှ ဆီများသုတ်ပေးပါ။
၁၂။ ဟောင်ကောင် ဘဲကင်ရပြီ ဆိုလျှင် ကြိုက်နှစ်သက်ရာ ဆော့ဖြင့် တွဲဖက်ကာ သုံးဆောင်နိုင်ပါပြီ။
Tips: ဘဲကင်ကို ဆော့ရည်များ နှပ်ပြီ တညသိပ်က ပိုမိုကောင်းမွန်ပါသည်။
Posted in တရုတ်ဟင်း ချက်ပြုတ်နည်း, အဓိက ဟင်းလျာများ | 27 Comments
on June 14, 2011 at 3:07 am | Reply Dare
on June 14, 2011 at 3:09 am | Reply chowutyee
Thanks Dare! 😀
on June 14, 2011 at 3:43 am | Reply Nut Minn
အခုတောင် စားချင်လာပြီဗျာ ဒီပို့စ်ကလေးကို အရမ်းနှစ်သက်တယ် မော်စကိုမှာ ဘဲရှားတယ် မြန်မာနိုင်ငံပြန်ရောက်ရင် ကင်စားမယ် 😀
on June 14, 2011 at 6:42 am | Reply chowutyee
ok.. မြန်မာပြည်ရောက်မှ အ၀ကင်စားနော်.. 😛
on June 14, 2011 at 4:55 am | Reply ko nyein
thanks for this post. I will make it.
on June 14, 2011 at 6:43 am | Reply chowutyee
Thanks Ko Nyein too.. Plz try it, it is really good taste.. 🙂
on June 14, 2011 at 12:52 pm | Reply magyi
on July 19, 2011 at 9:18 am | Reply chowutyee
ma gyi yay 5lb = 2.27 kg par… Plz try it .. Thanks…
on June 14, 2011 at 1:15 pm | Reply ခင်ယမုံ
ညီမရေ.. စားချင်စရာ..အရမ်းကိုစားချင်တယ်.. ဒါပေမယ့် နော်ဝေမှာ ဘဲကိုရှာလို့မရဘူး..ညီမတင်ထားတာလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ပဲ အလွမ်းဖြေပါတော့မယ်….
on June 22, 2011 at 10:17 am | Reply chowutyee
on June 15, 2011 at 6:42 am | Reply saw
ြုကက်ကောင်လုံးကို ဂျင်းနဲ့ဘယ်လို ပေါင်းရလဲဟင်း။ုကက်သားပေါင်းကို ရှာလို့ မတွေ့ လို့ ။ ပုလင်းတွေ မသောက်ခြင်ဘူး။ ပေါင်းနည်းလေး သိရင်၊ ပေးသိမယ် ဆိုရင် sawnyunt@gmail.com ကို တဆိပ် ပို့ ပေးပါလားဟင်။ တစ်ခါ တလေ အလုပ်များရင် စာတွေ ဝင်မဖတ်နိုင်လို့ ပါ။
on June 22, 2011 at 10:26 am | Reply chowutyee
စောရေ ဂျင်းနဲ့ကြက်ကောင်လုံး ပေါင်းနည်း အားတာနဲ့ အီးမေးနဲ့ ပို့ပေးလိုက်ပါ့မယ်နော်. ကျေးဇူးပါ
on June 16, 2011 at 3:37 pm | Reply Cho Wut Hmone
a yan ko mike tal and look really yummmy….wanna eat and treate me….
on June 22, 2011 at 10:25 am | Reply chowutyee
on June 17, 2011 at 5:03 am | Reply ချော
ဘုရားရေ ထမင်းမစားခင် လာကြည့်တာ မှားပြီ
ဗိုက်က အသံမျိုးစုံမြည်သွားတယ် စားချင်တယ် စားချင်တယ်
on June 22, 2011 at 10:19 am | Reply chowutyee
on June 18, 2011 at 12:35 pm | Reply han kyi
ဟား…သွားရည်ကျလိုက်တာဗျာ…ဘဲကင်…ဘဲကင်…ဝေးခဲ့တာ ရှစ်နှစ်ကြီးများတောင်ကြာပါပေါ့လား…ရွှေဘဲက ဘဲကင်ရယ်…ရှေးဖြစ်ဟောင်း အောက်မေ့ဖွယ်တွေတောင် ပြန်သတိရမိပါပကောလား…
on June 22, 2011 at 10:27 am | Reply chowutyee
on June 18, 2011 at 1:57 pm | Reply ကိုကိုမောင်(ပန်းရနံ့)
ဘဲကင်ကို မကြိုက်တတ်ပေမဲ့ မြည်းတော့ မြည်းကြည့်ချင်စရာလေး။
on June 22, 2011 at 10:29 am | Reply chowutyee
ကိုကိုမောင်ရေ စားလို့ကောင်းတယ်။ မြည်းသွားပါနော်… 😀
on August 18, 2011 at 4:33 am | Reply 99shinayi
ဘဲကင် ကောင်းကောင်း မကင်တတ်တာနဲ့အတော် ပဲ …ခုလိုပြည့်ပြည်စုံစုံ လေ့လာလိုက်ရတာ …ကျေးဇူးပဲ….အမ
on November 25, 2011 at 6:21 am | Reply yuki
ဘဲကို ရေခဲသေတ္တာ freezer ထဲ ထည့်နှပ်ရမှာလား အောက်ထဲမှာပဲ ထည့်ရမှာလား သိချင်လို့ ပါ…မြင်တာနဲ့ မနည်းထိန်းထားရတာ (စားချင်စိတ်)… 🙂
on November 25, 2011 at 10:29 am | Reply chowutyee
ရေခဲသေတ္တာအောက်ထပ်မှာပဲ ၄နာရီလောက် နုပ်ထားရင် ရပါပြီ.. လုပ်စားကြည့်ပါနော်. 🙂
on April 20, 2012 at 5:04 pm | Reply KoThetOo
on April 29, 2012 at 8:54 pm | Reply Hla Myo- New York
We can open restaurant like Chinese Restaurants and sell roasted duck. thanks . ChoWutYee.
on May 2, 2012 at 11:22 am | Reply chowutyee
Yeah I would like to Open also.. Thanksalot par sis Hla Myo… 🙂